Amaqhinga ama-5 okwandisa ukugcinwa kwikhitshi elincinci | IBezzia
Amakhitshi amancinci acelomngeni. Uyenza njani indawo yayo yonke into esiyifunayo kwindawo encinci? Ukugcina okuphezulu kubalulekile ekwenzeni ikhitshi lisebenze kunye nokupheka kusengowona msebenzi siwuthandayo. Kodwa ukwenza njani?
E-Bezzia siqokelele uthotho lweengcinga zokuba yandisa ugcino ekhitshini elincinci. Kwaye awudingi ikhitshi elingenanto ukuze ukwazi ukuziphumeza; Ngobuchule ungabaphumeza kwikhitshi esele lilungiselelwe. Qaphela!
Phambi kokuba uqale ukusebenzisa amaqhinga esabelana nawo nawe, sifuna ukuba ucace ukuba xa unezinto ezininzi kunendawo yokugcina, awusoze ufumane ikhitshi lakho licocekile. Ukubeka phambili, lahla into ongayisebenzisiyo rhoqo kwaye yonke into iya kuba lula kakhulu.
1 Thatha ithuba kuzo zonke iindonga
2 Ukunciphisa ubungakanani bezixhobo
3 Ukubheja kwiitafile ezisuswayo
4 Beka bucala indawo yento nganye
5 Faka iingcango ezityibilikayo
Thatha ithuba kuzo zonke iindonga
Ngaba unalo udonga olukhululekileyo ekhitshini lakho? Faka izisombululo zomgangatho ophakamileyo ezikuvumela ukuba wandise indawo yokugcina. Hlanganisa izisombululo zokugcina ezivaliweyo kunye nezinye ezivulekileyo ezikuvumela ukuba ube nayo yonke into oyisebenzisayo yonke imihla. Ezi zisombululo azidingi kuba nzulu kakhulu; Iisentimitha ezingama-20 zanele zombini ukulungiselela iingqayi zeglasi ezineembotyi, iinkozo, iimbewu kunye nezinongo, kunye nokugcina izixhobo ezincinane, izitya okanye iikomityi.
Unokuphinda usebenzise ithuba lekhitshi elingaphambili ukuze ube nesithuba esongezelelweyo sokucwangcisa ii-condiment ezahlukeneyo kunye nezixhobo. A intsimbi okanye ishelufu emxinwa iya kukunika indawo phakathi kwendawo yokusebenza kunye neekhabhathi ezingasentla kwizinto ezingaphezulu kunokuba ucinga.
Ukunciphisa ubungakanani bezixhobo
Izixhobo zithatha indawo enkulu ekhitshini lethu. Nangona kunjalo, oku akufuneki ukuba kubenje; singalungelelanisa ubungakanani bezixhobo zethu zokusebenza kubungakanani bekhitshi lethu. Ukubeka phambili ngokubalulekileyo kubalulekile ukukhetha izixhobo zombane esinokuzenza ngaphandle kwazo okanye esinokuzinciphisa ngobungakanani bazo.
Ngaba i-Dishwasher ibalulekile kuwe? Mhlawumbi ungabunciphisa ubungakanani bayo endaweni yokunxiba rhoqo. Kwakhona, ukuba awugqithisi, ngekhe uyidinge isitovu sokupheka ezine. Usenokude ucinge ukwenza ngaphandle kwe-oveni okanye i-microwave kunye nokukhetha i-oven microwave, a isixhobo esisebenza kabini. Olu kunye nolunye utshintsho olunje ngokunciphisa ubungakanani befriji luyakuvumela ukonwabela indawo engaphezulu yokugcina izinto.
Ukubheja kwiitafile ezisuswayo
Itafile yokukhupha isinceda njani sandise ukugcinwa ekhitshini? Ngokwesiqhelo xa sinika ikhitshi sikwenza ngokugcina olunye lweendonga ukubeka itafile. Itafile ekwikhitshi elincinci ihlala isonga. Nangona kunjalo, namhlanje akudingeki ndinikezele ngodonga lweekhabhathi ukubeka itafile.
Ukukhupha iitafile lolunye uhlobo kwiitheyibhile zokusonga kwiikhitshi ezincinci. Zidibene nekhabhathi zasekhitshini ngokungathi sisiqwenga seTetris. Ngale ndlela, indawo yokugcina ekufuneka yenziwe ngaphandle komncinci.
Beka bucala indawo yento nganye
Enye indlela yokwandisa indawo yokugcina kukwaba indawo yento nganye. Ngale ndlela kuphela unako Lungiselela iikhabhathi nganye okanye iidrowa ukulungiselela izinto ezininzi kangangoko. Ungakufezekisa oku ngokusebenzisa izisombululo ezisuswayo, ukwahlulahlula ...
Linganisa kakuhle ikhabethe nganye, into ofuna ukuyigcina kuyo kwaye ujonge izisombululo ezifanelekileyo zokuyenza isebenze. Namhlanje zininzi iivenkile ezinikezelwe kumbutho wasekhaya apho uya kufumana yonke into oyifunayo. Kakhulu kangangokuba kuya kufuneka uphephe ukuphambana ukuze ungagqithisi.
Faka iingcango ezityibilikayo
Iingcango ezityibilikayo zisombulula iingxaki ezininzi kwiindawo ezincinci. Ayipheleli nje ekuququzeleleni intshukumo kwezi, kodwa ziyakuvumela ukuba ubeke iikhabhathi apho kukho iingcango eziqhelekileyo apho kungenakwenzeka ukwenza njalo. Jonga ii-pantry kumfanekiso ongentla! Uya kudinga iisentimitha ezingama-25 ubunzulu ukwenza ukulingana kunye neenkqubo ezilula kwaye ezingabizi mali kunye neengcango ezityibilikayo.
Ngaba uyazithanda ezi ntlobo zeembono ukuphucula ukusebenza kwekhitshi? Ngaba ziyasebenza kuwe?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ikhaya » Ukupheka » Amaqhinga ama-5 okwandisa ukugcinwa kwikhitshi elincinci
Indlela yokwenza amehlo aluhlaza